Iska Barta..3-dan Walax Ayaa Sababi Kara Shiirka Xun ee Jirka | Xaqiiqonews
Iska Barta..3-dan Walax Ayaa Sababi Kara Shiirka Xun ee Jirka
Jirka Aadanaha ayaa mara heerar kala duwan, iyo xaalado gaar ah,taasi oo dhacda in ay marmarka qaar nagu keento shiir Xun oo dadka dhibaya.
Dadka qaar ayaa isku daya in ay yareeyaan shiirka jirka iyaga oo isticmaala barfuuno ama waxyaaba dhididka la dagaalama, dadkan noocan ayaa marar qaar aanba ka warqabin in caadooyinka maalin laha ee ay sameeyaan yihiin waxyaabaha keeni shiirka xun.
sida caadiga dhididku ma lahan wax ur ah, laakin bikteeriya laga helo maqaarka ayaa dhididka ka dhigta mid uraya marka ay isku darmaan, haddaba dhididka uu sababo welwelka iyo istareeska ayaa ka gooban walxo cunto u ah bikteeriyada maqaarka ku nool, taasina waa sababta dhididka welwelka ku yimaada uu yahay mid soo uraaya si gaar ah.
Qaar ka mid ah Qudaarta
Tufaax waa qudaarta uga badan ee isticmaasha Gaaska jirka,maxaa yeelay dheef shiidka ayaa waxaa ku adag in uu si fudud u dhuuqo carbohydrates-ka ku jira qudaartan, sidaa darteed jirka ayaa soo saaraya gaas badan, taasi oo keenta shiir xun, sidoo kale qudaartan waxaa ka mid ah Canabka.
Qofka si xad dhaaf ah u caba Alkaholka waxaa macquul ah in jirkiisa yeesho ur xun,maxaa yeekay beerka ayaa alkaholka qaarkiisa u badala Aashato la soo baxda dhididka, taasi oo iyana sabab u ah shiir xun oo jirka uu yeesho
8 Xaqiiqo Oo Dunida Ku Saabsan Balse Aysan Dadku Ogeyn Dad badan !